Global Voices teny Malagasy » Kôngô (RDC) : Ady efa Nanana Fototra Niaviany, Gidragidra 50 Taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Desambra 2012 10:40 GMT 1	 · Mpanoratra Anna Gueye Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Angola, Borondi, Oganda, R.D. Kongo, Rwanda, Tanzania, Zambia, Zimbaboe, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Tsy azo manontolo ny fandehan'ny ady misy ankehitriny eo amin'ny mpiokon'ny M23 sy ny tafika kôngôley  raha tsy misy ny fampahatsiahivana ny tantara niandohan'ny ady isan-karazany eo amin'ny renim-paritra manodidina ireo farihy lehibe. Indro ary ny fizotry ny tantaran'ny fifandonana amin'ny antsipirihany tao anatin'ny 50 taona farany ao amin'io renim-paritra io.
Ao amin'ny Congo Forum no manoratra  i Jacques MBOKANI :
Tamin'ny 30 jona 1963 no nanambarana ny fahaleovantenan'i Congo nantsoina indray hoe Congo-Léopoldville. Nifampizarana teo amin'ny filoham-panjakana Joseph Kasa-Vubu  sy ny praiminisitra Patrice Lumumba  ny fahefana. Tamin'ny 25 novambra 1965  no nanesoran'ny jeneraly Joseph-Désiré Mobutu  izay notohanan'ny governemanta Belza sy i Etazonia ny filoha Kasa-Vubu , ka nakàny ny fahefana sy ny nanononany tena ho filohan'ny Repoblika demaokratikan'i Kôngô. Nijanona teo amin'ny fitondrana nandritra ny 30 taona izy ary nomeny anarana hoe Zaïre ny firenena teo anelanelan'ny taona 1971 ka hatramin'ny taona 1997.
Ao amin'ny tranonkalan'ny Sarintany jeografikan'i RDC  no ahitantsika :
Ny antony anatin'ny ady any RDC kosa dia hatramin'ny fitondrana jadon'i Joseph-Désiré Mobutu  izay nijanona teo amin'ny fitondrana hatramin'ny 1997 :
Konexinfo  manoritra indray ny mahatonga ny firenena maro ho tafiditra amin'ity ady ity :
Ny toe-draharaha ankehitriny any RDC, ao amin'ny faritra Kivu, dia nivoaka avy amin'ny fifandirana maro izay efa nisy tany amin'ny faritry ny farihy Afrikanina maro roapolo taona lasa izay . Mifandrohy avokoa ireo ady isan-karazany ireo. Mpitarika ady vaovao hafa no misolo toerana izay tafiditra eo amin'ny fitondrana.
Ilay Ogandey Yoweri Museveni , nanangona sy nanangana tafika mitam-piadiana ahitana olona 6.000 tany amin'ny sisintany manamorona an'i Tanzania , du Rwanda  ary Ouganda  ary nanongana ny filohan'ny fireneny voafidim-bahoaka, Milton Obote  tamin'ny 1986.
Tany Rwanda  tanelanelan'ny taona 1990 sy 1993 ny FPR izay manana ho mpitarika azy an'i Paul Kagamé  no niady tamin'ny fitondran'antoko tokana an'ny filoha Juvénal Habyarimana .
Tamin'ny 1994, ny fandringanam-bahoaka  tany Rwanda  (izay manana sisintany iraisana amin'i RDC) no nanosika olona eo ho eo amin'ny 2 arivoarivo [tapitrisa] honina any atsinanan'ny firenena.
Hatramin'ny Zaïre ka hatramin'ny Repoblika Demokratikan'i Kôngô  ary mandrapahatongan'ny korontana tanteraka ankehitriny :
Tamin'ny 1996, tany atsimon'i Kivu, fanombohan'ny fiokoan'ny Banyamulenge , Tutsi kongoley manana fiaviana rwandey (izay nonina tany amin'ny faritra hatramin'ny 1959 raha nandositra ny herisetra tany Rwanda ), notohanan'i Rwanda , Ouganda  ary Burundi  ara-miaramila. Tamin'ny fiarahana tamin'ireo mpanohitra ny filoha zaïroà ny marosaly Mobutu , no nivondronan'izy ireo tao amin'ny “Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre” (AFDL na Fiombonan'ny hery demokratika ho fanafahana an'i Zaira) notarihan'i Laurent-Désiré Kabila .
Rehefa nitondra nandritra ny 30 taona ny filoha Mobutu  dia nanao sesintany ny tenany mialoha ny fandresen'ny mpioko. Nilaza tena ho filohan'ny Repoblika Demokratikan'i Kôngô, iantsoana indray an'i Zaira i Laurent-Désiré Kabila . Tafiditra an-drenivohitra Kinshasa ny mpioko tamin'ny 17 mey 1997.
Fandravàna ny tobin'ny mpialokaloka rwandey izay tafiditry ny miaramilam-panjakana rwandey teo aloha sy ny milisy mahery setra Hutu – ry Interahamwe - tompon'antoka tamin'ny fandringanam-bahoaka  tamin'ny 1994 tao Rwanda .
Nanapaka ny fiarahany tamin'i Rwanda, Ouganda ary Burundi i Laurent-Désiré Kabila .
Tamin'ny 1998, fiokoana vaovaon'ny Tutsi Banyamulenge  indray nipoaka tao Kivu ho fanoherana ny tafi-panjakan'i Laurent-Désiré Kabila , fiokoana notohanan'ny mpiara-dia taminy taloha, sy Rwanda  ary Ouganda . Nanangana fivondronana ara-politika sy miaramila antsoina hoe “Rassemblement congolais pour la démocratie” (RCD na Fivondronan'ny kongoley ho amin'ny demokrasia) izay tarihan'i Ernest Wamba dia Wamba  ry zareo.
Firenena fito no miady ao amin'ny tany kongoley : ny mpioko kongoley izay tohanan'i Rwanda , Ouganda  ary Burundi … nahazo an'i Kisangani  (renivohitry ny faritany atsinanana), tanàndehibe fahatelon'ny firenena. Voasakana tamin'ny fandrosoany hizotra ho any Kinshasa ry zareo noho ny fidirana an-tsehatra nataon'ny tafika avy any Angola  sy Namibia  ary Zimbabwe .
Nitresaka ny firenena : ny avaratra sy atsimon'i Kivu eo ambany fahefan'ny RC ; ny andrefana mbola voafehin'i Laurent-Désiré Kabila  sy ny mpiara-dia aminy (Angola , Namibia  ary Zimbabwe ).
Tamin'ny 1998 ihany, nisy fiokoana hafa notarihan'i Jean-Pierre Bemba  tany amin'ny faritanin'i Ekoatera, dia ny “Mouvement pour la libération du Congo” (MLC na Hetsika ho Fanafahana an'i Kongo) ka nifehy ny faritra tany, notohanan'i Ouganda  ary nandrombaka ny tanànan'i Kindu any amin'ny faritra be harena an-kibon'ny tany ao Kasaï sy Katanga.
17 mey 1999, nizara roa ny RCD an'i Ernest Wamba dia Wamba  : RCD-Goma tarihan'i Émile Ilunga Kalambo  sy tohanan'i Rwanda sy ny RCD-Kisangani  izay mbola eo ambany fahefan'i Ernest Wamba dia Wamba  ary tohanan'i Ouganda  izay manohana ihany koa ny MLC an'i Jean-Pierre Bemba .
Tsy mahafehy afa-tsy ny tapany andrefan'ny firenena ny fitondran'i Laurent-Désiré Kabila .
Tsy nanova na inona na inona amin'ny fandripahana ny fifanarahan'i Lusaka  (Zambia) izay nosoniavina tamin'ny jolay 1999 : Mifehy ny ampahany amin'ny Faritany atsinanana, ny avaratra sy atsimon'i Kivu ary Katanga avaratra ny tafika Rwandey. Ny tafika ogandey koa mifehy ny faritany avaratr'i Ekoatera sy ny Faritany atsinanana. Na teo aza ny fifanarahana, mitohy ny ady sy fandripahana teo amin'ny firenena roa tonta ary iadiana mafy ny fifehezana ny tanànan'i Kisangani , toerana ilaina amin'ny tsenan'ny diamondra, izay miteraka ny fahafatesana sivily roanjato.
Tamin'ny 2001 no nisy namono ny filoha Laurent-Désiré Kabila , ny zanany Joseph Kabila  no voatendry ho filoham-panjakana tamin'ny 17 janoary.
Mifandimby ny tolo-kevitry ny Firenena Mikambana , ny fifanarahana  eo amin'ny mpifanandrina ary ny fikezahana  hametrahana ny demokrasia  no mibaiko ny fandripahana, ny fanolanana mandritra ny ady  any RDC ahafahan'ireo hery vahiny sy ny orinasa [goavana] mitrandraka ireo harena an-kibon'ny tany sarobidy ilaina amin'ny findaintsika amin'izao fotoana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/05/42464/
 mpiokon'ny M23 sy ny tafika kôngôley: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9bellion_du_M23
 25 novambra 1965: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/eve/506.html
 famonoana an'i Patrice Lumumba : http://www.youtube.com/watch?v=cOYQjegItnM
 Mobutu: Mpanjakan'i Zaïre, Ny Fandromba-pahefana : http://www.youtube.com/watch?v=Tiz7egpUzUg
 Sarintany jeografikan'i RDC: http://rdcmaps.centerblog.net/31-ressources-minieres-et-energetiques-de-la-rdc
 Mobutu, Mpanjakan'i Zaïre 2 Ilay tompon'ny lalao : http://www.youtube.com/watch?v=ZMElq6Pj580
 fifandirana maro izay efa nisy tany amin'ny faritry ny farihy Afrikanina maro roapolo taona lasa izay: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/introduction.shtml
 Hatramin'ny Zaïre ka hatramin'ny Repoblika Demokratikan'i Kôngô: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000098-le-conflit-des-grands-lacs-en-afrique/chronologie
 fifanarahan'i Lusaka: http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_cessez-le-feu_de_Lusaka
 tolo-kevitry ny Firenena Mikambana: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_l
 ny fanolanana mandritra ny ady: http://www.unicef.org/french/infobycountry/drcongo_44598.html
 harena an-kibon'ny tany sarobidy ilaina amin'ny findaintsika amin'izao fotoana: http://www.arte.tv/fr/blood-in-the-mobile/3688482.html